लेख / रचना Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - सामाजिक र आर्थिक चित्रणमा नेपाल !
भ्रष्टाचार निवारण र कर्मचारी संयन्त्रलाई ठीक ठेगानमा राख्ने बित्तिकै अधिकांश समस्या स्वतः समाप्त हुन्छन् ♦ चन्द्रमणि गौतम ♦ आर्थिक–सामाजिक कोणबाट हेर्दा नेपालको अधोगतिशिल दारुण अवस्था पाइन्छ । हुन त मानिसहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा बृद्धि भइरहेको र आयात बढिरहेको छ । तर यो क्षमता खतरनाक गतिमा बढिरहेको विपे्रषण (रेमिटान्स्) को योगदान हो । यसलाई किन खतरनाक भनियो, यथास्थानमा चर्चा गरिने छ ।	थप पढ्नुहोस्
वरदानको भेषमा पाएको अभिशाप !
दुईतिहाई मतको शक्तिमा गठित सरकार लाचार र स्खलित जस्तो भएको अवस्थाभित्र नियाल्दा ♠ ईन्द्र रिजाल ♠ दुईतिहाई जनादेशको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य कि त बीपीले पाए कि त केपीले पाएका छन् । तर दुईतिहाई मतको जनादेश अफापसिद्ध भयो भने २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दुईतिहाई बहुमतको सरकार भङ्ग गर्नुका साथै संसद विघटन गरेको र पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको औचित्य स्थापित हुनपुग्यो भने त्यसको परिणति के होला ? २०१७ सालको भुक्तभोगी कांग्रेस र हालको दुईतिहाईवाला कम्युनिस्ट पार्टीका लागि साझा प्रश्न हो योे ।	थप पढ्नुहोस्
♦ देवेन्द्र चुडाल ♦ लामो समयदेखि विवादमा आएका कोरियाको युनिभर्सल पिस फेडेरेशन (युपिएफ) को दुई दिने एशिया प्यासिफिक सम्मेलनको समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक लाख डलर राशीको नेतृत्व र सुशासन पुरस्कारसहित सुनको तक्मा दिइयो । सो पुरस्कार युनिफिकेशन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनले प्रधानमन्त्रीलाई दिएकी थिइन् । सो पुरस्कारलाई कोरियामा नोबल पुरस्कार सरह मानिन्छ भन्ने क्रिश्चियनहरुले हल्ला चलाउने गरेपनि त्यसमा कुनै दम देखिँदैन । एकजना व्यक्तिको निर्णयबाट दिइने पुरस्कारलाई पुरस्कार नभनी बक्सिस् दिएकोभन्दा फरक पर्दैन ।	थप पढ्नुहोस्
अब देशले कोल्टे फेर्छ भन्थे, उत्तानो पो परेछ !
♦शान्तिमान श्रेष्ठ ♦ –देश तरंगित भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको नौ महिनापछि निकै तामझामका साथ सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै त्यस कार्यक्रमको मंगलबार शुभारम्भ गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष अन्र्तगत औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा, निवृत्तिभरण जस्ता सेवा पर्ने बताइएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् –" अब रोजगारी गर्ने आम मानिसमा खुशी छाउनेछ ।" सरकारले यसअघि पनि निकै ताझामका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेपनि त्यस्ता कार्यक्रमहरु सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।	थप पढ्नुहोस्
१० वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई भारतले संरक्षण गरेको थियो । माओवादीका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका अन्य धेरै नेताहरुलाई भारतले संरक्षण दिएर भारतमै सुरक्षित रुपमा राखेको थियो । सत्ता हत्याउनका लागि विदेशी भूमिमा बसेर आफ्ना नागरिकहरुकोे हत्या गर्न पछि नपर्ने कम्युनिष्ट चरित्रले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । काठमाडौं । तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले जनताबाट जुन समर्थन पाएका थिए, अहिले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले त्यो समर्थन पाउन सकेका छैनन् ।	थप पढ्नुहोस्
शनिबारको बिहान । १० वर्षीय हेनरी हेली उठिसकेका छन् । उनी पाइजामामै छन् तर उनको माइक्रोफोन जडित हेडफोनमा नीलो बत्ती बल्न थालिसकेको छ । उनी ठूलो स्क्रीनमा बच्चाहरुको लोकप्रिय अनलाइन खेल “फोर्टनाइट” खेल्न थालिसकेका छन् । “लौ ? मैले जित्नै लागेको थिएँ, म त मरें,” उनी गस नाम गरेका साथीलाई भन्छन् । पाँच कक्षाका यी सहपाठी साथी गसको घर हेनरीको भन्दा दुई–चार घर टाढा मात्र छ । “साथी, मैले हार्नु हुँदैनथ्यो ।” उनीहरुबीचको यो डिजिटल ब्याटल (प्रतिस्पर्धा) पुनः शुरु हुन्छ, र हेनरीको उत्साहमा कमी आएकै छैन ।	थप पढ्नुहोस्
२०७६ सालपछिको कालखण्डमा वर्तमान संविधानमा ‘आनको तान’ हेरफेर हुने कारण ♠ इन्द्र रिजाल ♠ केही रहस्यमय घटनाक्रम :- ‘श्रीपेच गायब भएन स्थापित भयो’ :- गएको दशैँ फूलपातीको पूर्वसन्ध्यामा सबै चाडपर्व मनाउन तल्लिन थिए । राजधानीबाट २५ लाख मानिस उपत्यका छोडेर घरतिर लागेका थिए । त्यही मौका छोपेर सरकारले राजतन्त्रजन्य श्रीपेच, राजगद्दी, रानीले लगाउने टायरा (मुकुट), राजदण्ड आदि राजतन्त्रका पहिचानलाई स्थापित ग¥यो । कुनै प्रचण्ड दबाबलाई टार्न नसकेपछि बिर्सिँदै लगेको राजतन्त्रको पहिचान स्थापित भयो ।	थप पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीको निर्देशनको बिजोग !
♦ सञ्चिता पौड्याल / नेपालबहस टिप्पणी ♦ अपत्यारिलो र हामीलाई अचम्म लाग्ने एउटा घटनालाई उदाहरणका रुपमा लिएर प्रसंग शुरू गरौँ । सन् ८० को दशकमा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका जर्मनीका चान्सलर हेल्मुट कोहललाई दृश्यावलोकनका लागि पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा लगियो । उनी त्यहाँका मन्दिर र स्मारकहरू ध्यानपूर्वक हेर्दै बिस्तारै हिँडिरहेका थिए । उनैको तालमा स्वागत र भ्रमण टोलीको हुल पनि । एउटा सानो तर जीर्ण हुन थालेको मन्दिरमा कोहलका आँखा टक्क अडिए र उनले सवारीमन्त्री र आफ्ना राजदूतलाई भने “यो मन्दिरको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएछ ।” उनले त्यतिमात्र भने ।	थप पढ्नुहोस्
हलिगोठाला र भरौटेहरुको मानविय संवेदना !
♥ शान्तिमान श्रेष्ठ ♥ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँको सघन उपचार चलिरा'छ । सर्वप्रथम उहाँको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना ! हालैका दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीका बारे सामाजिक संजाल र अनलाइन मिडियाहरुमा विभिन्न अफवाह फैलाइए । एकथरीहरु मरेमरोस, उखाने , रिप, मरेदेखि विदेशमा उपचार गर्न लाग्ने राज्यको पैसा बचत हुन्थ्यो , उखान सुन्न नपाइने भयो ... इत्यादी खालको कटु बचन पोख्न ब्यस्त रहे । अर्कोथरीहरु यस्तो तितो बचन पोख्नेहरु प्रति खनिंदै मानवीय संवेदना हराएको , निर्दयी , हृदयहिन शैतानहरु भन्न भ्याए । यस सन्दर्भमा मेरो आफ्नै खाले दृष्टिकोण छ ।	थप पढ्नुहोस्